3 Izimbobo Zesimanjemanje Ezimnyama Ompompi Basegumbini Lokugezela Abasabalele 2 Izibambo Ompompi Abayize Begumbi Lokugeza
Ikhaya / Amanzi okugeza / Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile /Izimbobo Ezi-3 Ompompi Basegumbini Lokugezela Abasabalele Kabanzi Abamnyama 2 Izibambo Ompompi Abayize Begumbi Lokugeza
UBUHLUNGU OBUMNYAMA, ISIXHUMANISI ESITHUSI: isiphetho esihle, isitayela sokugezela esisabalele se-retro, ukuqina kompompi wokugezela kuyaqinisekiswa, ukungagqwala, ukungagqwali, ukunqamuka
UKUFAKA OKUSHESHAYO KWE-CREATIVE: ukwakhiwa kokuxhuma okuhlukile okuhlukile, amanzi ashisayo nabandayo angaxubaniswa ngepayipi lokufaka ngokushesha ngaphandle kwesikrufu, ngokusebenzisa inqubo yokuvikela ukuqhuma kwepayipi
UMDIYINKO ONGAGUQUZEKA OBABANZI: 4 -16 inch ompompi bamagumbi okugezela asabalele i-3-hole mount, ibanga lokufaka lingalungiswa ngezidingo, liza ne-pop up drain.
IZIMPENDULO EZIMBILI 2 IZINGXENYE ZESIKHATHI ESIKHULU SOKUXHUMANA: isibambo esiphindwe kabili, idizayini yezingcezu ezi-3 ilungele ukulawula okunembile kokubili kwevolumu nokushisa kwamanzi. Ukufakwa uphawu okuphezulu kwegobolondo le-ceramic, kunokusebenza okungaconsiki. Futhi i-aerator ye-NEOPERL yokonga amanzi ifakwe
ISIQINISEKISO, UKUSEKELWA KWEKHASIMENDE: Iwaranti yeminyaka emi-5 nokusekelwa kwamakhasimende kuyahlinzekwa. Ihlanganiswe ngokubuya kwezinsuku ezingama-90. Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
I-Matte EMNYAMA OMFUMU WASEBHAFA OWANZI
Ukukhetha faizets yakho yokugezela 2320300B
Uma uklama noma uklama kabusha indlu yakho yokugezela, awukwazi ukubukela phansi umthelela wompompi basendlini yokugezela. Lezi cishe ziyizinto ezincane kunazo zonke endlini yakho yokugezela, kodwa nokho zingamaphuzu okugxila emvelo endlini yakho yokugezela. Noma ubani ongena endlini yakho yokugezela, ubheka ngokuzenzakalelayo ompompi bezindlu zangasese ekuqaleni. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukukhetha kahle ompompi bakho bokugezela. Ompompi basendlini yokugezela bafika ngezitayela eziningi, izimo kanye nemiklamo.
Ukukhetha umpompi ofanele wokugezela kungase kube inselele kwabanye. I-Faucet yokugezela efanele ingase inikeze indlu yakho yokugezela ukuthinta komuntu siqu eyayikudinga ngempela. Kungenza umehluko omkhulu ekubukekeni kwendlu yakho yokugezela. Kodwa ngaphezu kwakho konke, ompompi basendlini yokugezela kufanele bahambisane nesitayela sonke sendlu yakho yokugezela. Ngakho-ke ungase uthande ukucabangela zonke izici zompompi wokugezela ocabanga ukuwukhetha. Nokho, masingakhohlwa ukuthi ukudizayina noma ukudizayina kabusha igumbi lakho lokugezela kuwumcimbi othokozisayo kakhulu. Uyakwazi ukuklama yokugezela yakho entsha ngokuphelele ukunambitheka yakho siqu. Ngakho-ke ake sikusize ngompompi wethu wokugezela osabalele omnyama osesitayeleni.
Umpompi wokugezela ogcwele izimbobo ezi-3 onesitayela
Umehluko omkhulu phakathi kukampompi wokugezela we-spout osabalele kanye nezinye izinto ezilungiswayo, indawo yezibambo, kokubili kushisa nokubanda. Kumpompi wokugezela osabalele izibambo zibekwe ohlangothini ngalunye lwesimpompi ngokwaso. Ompompi basetha emaphakathi ngokwesibonelo, usebenzisa imbobo eyodwa ebhojwe kusinki. Ngakolunye uhlangothi, ngempompi eyodwa yembobo ngokwesibonelo, ungakwazi ukulawula amanzi ashisayo nabandayo ngesibambo esisodwa nje.
Ngokuphambene, ngompompi wokugezela osabalele udinga ukubhoboza izimbobo ezintathu kusinki yokugezela futhi ulawula amanzi ngezibambo ezimbili ezihlukene zawo womabili amanzi ashisayo nabandayo. Lokho kwenza kube lula ukulawula izinga lokushisa lamanzi ngokunembile. Ukukhetha i-faucet yokugezela ebanzi, unikezwa izinketho ezihlukahlukene kanye nokuqeda. Ungenza umthelela omkhulu ekuhlobiseni kwakho ngombala omnyama. Lokhu kuzokwenza nakanjani umpompi wakho wokugezela owandile ube into edonsa amehlo endlini yakho yokugezela. Ngaphandle kwalokho kuzodingeka ukhethe ukusebenza.
Ufuna ukwenzani umpompi wakho wokugezela ogcwele yonke indawo? Uma wenza ukukhetha, vele ukhethe umpompi wampompi wokugezela osabalele njengendawo entsha yokugxila yomklamo wakho omusha wokugezela.
Matte black okwandile 2 Handle Modern yokugezela impompi
Okumnyama kungase kube inketho emangalisayo ekuhlobiseni kwakho kwangasese. Ikakhulukazi uma kukhona ezinye izakhi ezimnyama endlini yakho yokugezela. Impompi yokugezela egcwele yonke indawo emnyama izohlangana ngaphandle komthungo nawo wonke umklamo wakho wokugezela. Ngokusobala ungenza umehluko nge-faucet emnyama yokugezela esakazekile endlini yakho yokugezela. Okokuqala ngoba ompompi black okwandile yokugezela kukhona ekhethekile. Njengoba bengebaningi abantu abalokotha basebenzise lo mklamo onesibindi endlini yabo yokugezela, ungakwazi ukuklama ngendlela ehlukile indlu yakho yokugezela ngalo mpompi wempompi wokugezela ogcwele wonke we-WOWOW.
Hhayi endaweni yokugcina ngoba inikeza leli phuzu lemvelo lokugxila endlini yakho yokugezela ukuphakanyiswa okuphelele ukuze ungalibukeli phansi. Igumbi lakho lokugezela lizoba kude nezinga elijwayelekile ngompompi wokugezela osabalele omnyama we-WOWOW. Ngaphandle kokungabaza noma ubani obona isidalwa sakho sokugezela esiyingqayizivele, uzomangala ngakho. Futhi hhayi endaweni yokugcina ngenxa yezimpompi zangasese ezipholile ezisabalele ezimnyama ozikhethile.
Ngaphambi kwesitayela kufanele uthathe uhlelo lokusebenza olusebenzayo ukucubungula. Yini inhloso yokugezela eyenzelwe kahle engazisebenzisi izidingo zakho? Ngokusobala unquma ukuthi ufuna imishini yakho yokugezela isebenze kanjani izifiso zakho. Ifana nengxenye yomklamo, amakhethini okugezela mancane ngomthelela omkhulu. Lokho ngokusobala kusebenza kokusebenza futhi.
Ukuhlanganisa kahle umpompi wokugezela we-Vanity owandile
Impompi yokugezela ka-WOWOW emnyama esabalele ifanele izindlu zangasese eziningi. Kodwa-ke kufanele kube ingxenye eyodwa ehambisanayo nawo wonke umklamo wakho wokugezela. WOWOW ngakho-ke unompompi abafanayo abansundu basendlini, njengokungathi ompompi bamashawa amnyama, ompompi bakabhavu abamnyama kanye nompompi abamnyama basendlini. Ngale ndlela ungakwazi ukuklama yakho yokugezela ngokuvumelana nezinye ompompi black yokugezela. Uzokwenza umbono omkhulu ngayo!
Futhi ngaphandle kwalokho, isimpompi esimnyama sokugezela esisabalele se-WOWOW sizokunikeza ukusebenza okufisayo. Lesi sici esimnyama esisabalele saklanyelwe ukwenza umugqa womkhiqizo wesimanje, we-minimalistic nokho wesimanje wezinto zokugezela. Noma kunjalo le faucet emnyama yokugezela egcwele yonke indawo ye-WOWOW iyacwebezela futhi iyinkimbinkimbi futhi. Isivalo se-pop-up esihlanganisiwe siklanywe ngokuhlangene, kodwa sikunikeza isilawuli esibushelelezi. Noma ubani obona le faucet emnyama egcwele yonke indawo uzohlabeka umxhwele ngokuklama nokusebenza kwayo. Impela yaklanywa yaba nombono ocacile noyingqayizivele.
Umpompi wokugezela osabalele wekhwalithi ephezulu wosinki wakho, Njengayo yonke imikhiqizo yawo, i-WOWOW isebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zalompompi ogcwele indawo yokugezela. Uyakubona lokhu ngokwesibonelo uma usebenzisa izibambo zalompompi ogcwele indawo yokugezela. Ikhwalithi iqinisekisa ukuzinza okungcono kanye nokusebenzisa impilo ende. I-spout yesikwele esiphezulu esikhethekile saklanywa ngendlela yokuthi amaconsi angasaphazeki ngenxa yobude bawo. Ubuso balo mpompo wamanzi wokugezela osabalele bumnyama, kodwa izixhumi zenziwe ngethusi.
Izinto zethusi eziqinile ziyisinqumo esingcono uma kuqhathaniswa nezinye izinto zensimbi. Akudingekile ukuba ukhathazeke ngokwesibonelo ukugqwala. Ngakho-ke, ukuqina kwalo mpompi wokugezela osabalele omnyama kuqinisekisiwe. Ngaphandle kwalokho, ingaphezulu liyi-anti-scratch futhi, ngakho-ke uzoqinisekiswa ngokubukeka okusha isikhathi eside. Lesi simpompi sekhwalithi ephezulu esimnyama esisabalele sokugezela sikasinki wakho sizoba ukuthinta okuphelele kokuphothula umklamo wakho wokugezela.
Ukufakwa kalula kukampompi wegumbi lokugezela le-matte omnyama
I-WOWOW's swivel spout bathroom ompompi kulula ukuyifaka ngesiqondisi sayo sokufaka esisheshayo. Amanzi abandayo futhi ashisayo angahlanganiswa kalula nesixhumi sokufaka esheshayo. Okompompi bendawo yokugezela kanye nezibambo uzodinga izimbobo ezintathu zika-1 "-1.5" futhi indawo yasesinkini ingaba wu-0.2 "-1.2" obukhulu. Umpompi ompompi wokugezela omnyama weWOWOW ungasethwa ngamasentimitha ama-4 kuye kwayi-16, ngokuya ngesitayela sakho. Njengoba isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esimnyama esimnyama kulula ukusigcina futhi, i-WOWOW ayesabi ukunikeza iwaranti yeminyaka emi-5 kumkhiqizo wayo. Le nto iphinde ihlanganiswe nenqubomgomo yokubuyisa mahhala yezinsuku ezingama-90. I-WOWOW ithemba ipayipi layo elimnyama elisendlini yokugezela futhi inganeliseka kuphela ngokwaneliseka kwamakhasimende okungu-100%!
Izinzuzo zompompi Wokugeza Wokugeza Omnyama WOWOW Omnyama ngamafuphi:
● Inikeza i-wow-factor kunoma iyiphi indawo yokugezela
● Inhlanganisela eyingqayizivele yomklamo wakudala nowesimanje
● Kulula ukuhlangana namanye ompompi bendawo yokugezela
● Inikeza ukusebenza okuhle okulingana nezidingo zakho
● Ihlanganisa ama-esthetics nokusebenza okuphezulu
● Yenziwe ngezinto zethusi ezisezingeni eliphakeme
● Kulula ukuyihlanza futhi kulula ukuyigcina
● Unyaka owodwa iwaranti
umpompi wasekhishini okhipha isifutho
amakhanda ompompi basekhishini
umpompi wasekhishini udonsela phansi
I-SKU: 2320300B Categories: Amanzi okugeza, Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile Tags: Black, Hlukanisa Isiphatho, I-Swivel Spout, Izibambo Ezimbili
11.14 x 10.2 x amasentimitha angu-3.27